Huawei Mate X2: Fitaovana vaovao misy efijery aforitra ary fiampangana haingana 55W | Androidsis
Huawei Mate X2: Fitaovana vaovao misy efijery mivalona ary 55W vola haingana
DaniPlay | | Huawei, Finday
Ilay mpanamboatra aziatika Nanapa-kevitra ny hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny Huawei Mate X2 vaovao i Huawei, ilay mpandimby mendrika ny Huawei Mate Xs. Satria ny zava-baovao hita maso dia ny efijery roa sosona, noho izany dia hivadika finday 6,45 santimetatra ho takelaka 8-inch mahomby izy.
Huawei Mate X2 efa sivana be pitsiny alohan'ny fanambarana, ka tsy mahagaga raha mahafantatra ny antsipiriany rehetra alohan'ny fampisehoana. Ny rafitra hinge amin'ny fisokafany dia navaozina, mitovy be amin'ny Samsung Galaxy Z Fold 2.
1 Huawei Mate X2, miresaka momba ilay fitaovana vaovao
2 Batteria ampy ary fiampangana haingana be
3 Fifandraisana sy rafitra fiasa
Huawei Mate X2, miresaka momba ilay fitaovana vaovao
Betsaka ny asa vita amin'ny fampiononana ny fampiasana, ny fanokafana ny telefaona dia hatao toy ny hoe mamaky boky ianao, ny tontonana lehibe dia OLED 6,45-inch miaraka amin'ny résolution 2.480 2.200 x 90 180 teboka. Ny tahan'ny famelomana dia XNUMX Hz ary santionany mikasika ny XNUMX Hz.
Vantany vao nosokafana ny tontonana anatiny dia nitombo OLED 8 Miaraka amin'ny fanapahan-kevitra 2.700 1.160 x 90 teboka, ny tahan'ny fanavaozana dia mijanona amin'ny 240 Hz ary mampitombo ny santionany mikasika ny 6,45 Hz. Ny 456 ″ dia manana 413 teboka isaky ny santimetatra, raha ny lehibe kosa dia mijanona miaraka amin'ny XNUMX dpi.
Ny mpikirakira voafidy ho an'ity fitaovana ity dia Kirin 9000, ilay mpikirakira farany avy amin'ny orinasa Huawei, CPU nitaingina Huawei P40 Pro ary tohanan'ny chip sary Mali G-78 NPU. Ny maodelin'ny RAM anatiny dia 8 GB ihany no safidy tokanaAmin'ny lafiny fitehirizana dia afaka misafidy eo anelanelan'ny 256 na 512 GB ianao, dia azo hitarina hatramin'ny 256 GB ambony indrindra miaraka amin'ny karatra NM.
Huawei Mate X2 dia mametraka sensor lehibe an'ny MP MPy 50 Ryyb an'ny marika Leica misy fàtana aperture f / 1.9, zoro mivelatra 16-megapixel, telephoto 8-megapixel misy zoom 10x, ary telephoto 8-megapixel misy zoro optika 3X. Ny fakantsary selfie anoloana dia mijanona amin'ny 16 megapixels miaraka amina f / 2.2 aperture, antsoina hoe zoro malalaka.
Batteria ampy ary fiampangana haingana be
Ny telefaona Huawei Mate X2 dia mitazona ny batterin'ny maodely hafa teo aloha avy amin'ny orinasa dia mijanona amin'ny 4.500 mAh ny bateria, ampy haharetan'ny fampiasana isan'andro. Amin'ny fananana efijery roa sosona dia mety hiakatra ny fanjifana na dia ilaina aza ny mahita azy amin'ny asa atao amin'ny famakafakana amin'ny ho avy.
Ny famandrihana haingana dia mitombo amin'ny 55W, mihoatra ny 40W voajanahary amin'ny maodely P40 Pro an'i Huawei, ho feno antsasak'adiny eo ho eo ny fiampangana. Izy io dia manana charger ao anaty boaty, raha mandoa ny famandrihana tsy misy tariby izy, teboka iray omena tsiny raha toa ka heverina ho avo lenta miaraka amin'ny vidiny lafo izy io.
Fifandraisana sy rafitra fiasa
Ny Huawei Mate X2 amin'ny fampidirana ny puce Kirin 9000 ao anatiny Izy io dia ho fitaovana misy fifandraisana 5G, miasa ihany koa izy eo ambanin'ny tamba-jotra 4G, manana Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS-Dual, USB-C ho an'ny famandrihana sy telefaona. Ny mpamaky ny rantsan-tànana amin'ity maodely ity dia mety ho karazana sisiny, mila manamboatra azy io raha vao esorintsika ao anaty boaty.
Huawei dia manohy miloka amin'ny EMUI amin'ity maodely ity alohan'ny hametrahana HarmonyOS 2.0, rafitra iray izay hahatratra maodely marobe amin'ny marika 20221. Tonga eo ambanin'ny Android 11 ny EMUI 10, nohavaozina tamin'ny patch tamin'ny volana Janoary ary azo havaozina ho an'ireo volana febroary raha vao velomina.
SCREEN Anatiny: OLED 8-inch (2.480 x 2.200 teboka) / tahan'ny famelomana 90 Hz / santionany mikasika ny 180 Hz / 456 dpi / Ivelany: 6.45-inch OLED (2.700 1.160 x 90 teboka) / tahan'ny famelomana 240 Hz / santionany mikasika ny 413 Hz / XNUMX dpi
PROCESSOR Kirin 9000
KARATRA GRAPHIC Mali G-78 NPU
FITONDRANA AN-TANY 256/512 GB / Expandable amin'ny karatra NM
CAMERA REAR 50 Megapixel OIS Main Sensor / 16 MP Wide Angle Sensor / 12 MP Telephoto Sensor / 8 MP Telephoto Sensor / 10x Optical Zoom
CAMERA HATRANY 16 MP sensor an'ny zoro malalaka
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 10 miaraka amin'ny EMUI 11
BATERA 4.500 mAh misy fiampangana haingana 55W
CONNECTIVITY 5G / 4G / WiFi 6 / Bluetooth 5.2 / Dual GPS / USB-C / NFC
OTHER Mpamaky ny tanan-tanan-tanana
DIMENSION SY lanjan'ny Aforitra: 161.8 x 74.6 x 13.6 / 14.7 mm / tsy mivalona: 161.8 x 145.8 x 4.4 / 8.2 mm / 295 grama
El Huawei Mate X2 tonga amin'ny loko efatra samy hafa hisafidianana: fotsy, mainty, manga ary mavokely, izy rehetra dia karakarain'ny mpamokatra. Ny vidin'ny maodely 8/256 GB dia manodidina ny 17.999 yuan (2.295 8 euro amin'ny taha-panakalozana) ary ny maodely 512/18.999 GB dia tafakatra 2.423 yuan (XNUMX euro).
Ny datin'ny fahatongavan'ny tsena aziatika dia ny 25 martsa mankany amin'ny tsenan-tranony, noho izany dia mbola fantatra ihany ny fahatongavan'i Espana sy ny firenena hafa. Ny Huawei Mate X2 dia ho lasa finday misy vidiny lafo nefa mendrika izany noho ny fitomboan'ny AppG Gallery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei Mate X2: Fitaovana vaovao misy efijery mivalona ary 55W vola haingana
Ahoana ny fomba hanasana ny olona amin'ny vondrona Telegram miaraka amin'ny kaody QR
Samsung dia manitatra ny fanavaozana ny fiarovana 3 ka hatramin'ny 4 taona